Samsung Gear S2 dị ugbu a na iOS | Akụkọ akụrụngwa
Samsung Gear S2 dị ugbu a na iOS
Villamandos | | Noticias, smartwatch
Ndi nwe a Samsung Gear S2 nọ na-eche ogologo oge maka omume nwee ike ijikọ smartwatch gị dịka ọmụmaatụ iPhone. Mgbe ogologo echere, nke ahụ ga-abụrịrị eziokwu n'ihi mmelite nke Verizon kwalitere maka ngwaọrụ Samsung, opekata mpe na United States.
N'oge a na mba ndị ọzọ, ndakọrịta a agaghị ekwe omume, ọ bụ ezie na a ga-eche n'echiche na ọ gaghị ewe ogologo oge iru Spain na ọtụtụ mba ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ. Samsung ekwenyebeghị ozi ọma ahụ, ọ bụ ezie na anyị nwere olileanya na ọ ga-eme ka ọ bụrụ gọọmentị n'oge na-adịghị anya wee malite ịmalite mmelite nke na-enye ohere smartwatch iji jikọọ na ngwaọrụ iOS gburugburu ụwa na ịhapụ smartwatches.
Kedu ka nkịtị si eme anyi amaghi otutu ihe banyere nkweko nke Gear S2 na iOS, nke a ga-ekpughe na mbata nke mmelite na ngwaọrụ na mba niile nke ụwa. Gịnị dị ka ihe doro anya bụ na nke a ga - abawanye ahịa nke ngwaọrụ ahụ, nke rue ugbu a emeriela ọtụtụ ndị nwe iPhone n'ihi enweghị ndakọrịta n'etiti ngwaọrụ abụọ.
Ọ bụrụ na ị nwere Samsung Gear S2 na iPhone ị nọ na chi, ọ bụ ezie na iji nwee obi ụtọ zuru oke, ị ga-echere ụbọchị ole na ole maka mmelite a ga-ewepụta na mba gị. N'ezie, echegbula n'ihi na ozugbo ụdị ọhụrụ nke sọftụwia maka Gear S2 dị, anyị ga-ekwupụta ya ka ị nwee ike iwunye ya ozugbo.
Kedu ihe ị chere nke ọkwa nke ndakọrịta n'etiti Samsung Gear S2 na Apple iPhone?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Samsung Gear S2 dị ugbu a na iOS
Ihe 22 kwuru, hapụ nke gị
Ọfọn, enweghị m ike ijikọ ha. Ihe m nwere ike ime
Ehihie ọma. Enwere m iPhone 6s Plus na unopened Gear S2. Ajuju m a buru na mgbe ijikọrọ ya, ị na anata whatsapp notifications na mobile gi ???
Arachaala m na-achọ ihe ọmụma mana enweghị m ike ịhụ ihe ọ bụla.
Ọ dị mma, m bụ otu, na iPhone m na elekere ọhụụ a zụtara na drọwa, n'ihi na ọ naghị achọpụta ya site na Bluetooth. M zụtara ya n'ihi nke a ozi ọma, anyị ga-ahụ….
Ọfọn, ọ dị egwu. Ahụla m ọtụtụ vidiyo ebe a hụrụ ya ka ọ si jikọọ ma nata ọkwa sitere na Facebook, akara na ndị ọzọ. Mana WhatsApp enweghị ihe ọ bụla. Anọ m ebe ahụ iji hụ ma m ga-ere ya ma ọ bụ debe ya. Ana m echere nzaghachi na ibe a.
O doro anya na akụkọ ahụ bụ ụgha ma bụrụ na a kwadobeghị ya. Enweghị ọrụ.
Zaghachi ka hiennysig
Akụkọ a bụ atụmatụ Samsung doro anya iji mepụta atụmanya ụgha maka ahịa ndị ọzọ. Ekwenyesiri m ike na enwere mmasị doro anya na nzacha ụdị akụkọ a na-amara na ọ gaghị adaba adaba, na ebumnuche naanị ya na ndị nzuzu dị ka m nọ ebe a na Samsung nche na iPhone na-eche ...
Nzọcha ọka dijo
M ka ha mekọrịta!
A nabatara ozi WhatsApp ma enweghị ike ịza ya ruo mgbe ha dakọtara
Thresh ma ọ bụrụ na ị ha emekọrịta ịkekọrịta usoro, na m furu efu na m ga-enwe ekele dị ukwuu.
Ndewo ụmụ okorobịa, m mekọrịta iPhone 6, ọghọm bụ na enweghị m ike ịzaghachi ozi ịntanetị, WhatsApp, Ihu, Twitter… site na elekere.
ya na mbụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ọnọdụ ma na-etinye na-arụ ọrụ bultooth adịkwaghị
Daalụ Nil. Ajuju, anyi na-ekwu banyere Europe ka obu America?
Ọ bụrụ na m tinye ya na ọnọdụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe mbụ, ihe niile ọ ga-ehichapụ ???
Maka whatapp ị ga-enwe ebe nkata
Salvador Gilperez dijo
Ozi ọ bụla banyere ya? Ọ nwere onye ọ bụla n'ezie synced iphone na gia s2 ??
Zaghachi Salvador Gilperez
Ee, mana ọ dị nfe dịka ịga na Bluetooth ma jikọta ya, oku, ọkwa, wdg.
Enrique M dijo
Na ọ bụrụ na enweghị ngwa na iphone? Enwere m iPhone 6 na ihe anaghị aga ma ọlị. Ahụghị m onye doro anya na onye ọ bụla. Onwere onye kowara usoro a biko?
Zaghachi Enrique M
Ọ na-achọsi ike ịghara imekọrịta ha, ọ bụrụ na enwere mmelite olee otu m ga-esi mee ya, enweghị m njikọ ọ bụla n'ihi na enweghị m ike ịmekọrịta ya na nke a n'ihi na enweghị m ike ịme mmelite, ọ bụrụ n'ezie na mmadụ nwere ike ịme ọ na-ekwu usoro ndị ahụ, na-egosi na anyị ga-enwe ekele maka ndị anyị na-enweghị ike
Enweghị m ike ịmekọrịta ha ma.
Enwere m iphone 5s na relog anaghị achọpụta m ma ọlị.
Relog bu na j !!!
Jean Pierre LACOR dijo
Olee otú wụnye WhatsApp na m Samsung Gear S2? M nwere arụnyere na m Galaxy S 6 ma enweghị m ike ịhụ ya na elekere.
Mmadu enwere ike gwa m?
Zaghachi Jean Pierre LACOR
pili GALERA MARTINEZ dijo
Ndewo, anam emekorita ya na iPhone 6 ma anata watsaps mana enweghị m ike ịza
ma ọ bụ na-akpọ, Amaghị m otú e si eme ya M synchronise ya taa, ma ọ bụrụ na mmadụ nwere ike inyere m aka
Zaghachi na pali GALERA MARTINEZ
Laura Martinez dijo
Nnọọ, ha nyere m Gear S2 na m nwere iPhone 5s, tupu ịmepe ya ị chere na enwere njikọ? Ọtụtụ n'ime ndị na-agụ na ị na-enweghị ihe isi ike nwere iphone 6 ... ọ ga-arụ ọrụ na 5s? ¿? ¿? Daalụ nke ukwuu
Zaghachi Laura Martínez
Ndewo onye ọ bụla, etinye m nke a iji nyere aka: Ejikọtara m Gear s2 na iphone 6s m, enweghị nsogbu, na mbụ m jikọtara ya naanị site na Bluetooth ma nata ọkwa, mana na enweghị ike ijikọ na sasung gear ngwa sitere na ụlọ ahịa apụl. Nyochaa m chọpụtara na ọ bụrụ na ị jikọtara elekere na Samsung, melite ya wee weghachite ya na ụlọ ọrụ ahụ, ọ na-ejikọ na ngwa Samsung iPhone, ugbu a ana m enyocha etu esi azaghachi WhatsApp. Enwere m olileanya na ọ ga-enyere gị aka. ekele
Ebumnuche 7 mere iPhone SE ga-enwe mmeri n'ahịa
Ihe 5 kpatara inweta iPhone SE bụ nnukwu echiche